Jwxo-shiil, oo Jidhku Googo,ay 7-ba Asbuucna Isbitaal ku Jiray – Rasaasa News
Jwxo-shiil, oo Jidhku Googo,ay 7-ba Asbuucna Isbitaal ku Jiray
Aug 28, 2010 dambiile, Eritrea, Jwxo-shiil, Ogaden, ONLF
Jwxo-shiil, oo meel walba guban dadkuna ka cararayaan cabsi darteed, ayaa maalintii sabtiga ahayd yimid kulan ay afar ruux oo kooxdiisa ah isugu timid guri ku yaal south hall. Jwxo-shiil, ayaa dadkii yaqaanay kolkay arkeen ay noqdeen wax ashahaado ku waasha iyo wax mantaga oo naxdin la kiciwaaya.
Sida ay wararku sheegayaan Jwxo-shiil, ayaan mudo 7-ba asbuuc ah aan la arag, waxayna kooxdiisa duqayda ah ee degan Ingriisku u qaateen in uu aaday dalka Masar oo uu hadal hayey in uu aadidoono.
Wararka ka imanaya dalka Ingriiska ayaa sheegaya in aan la xaqiijin karin in waxa ka muuqda oogada Jwxo-shiil, ay gubasho dab tahay iyo in uu yahay xanuun kale oo jidhka kaga dhacay. Waxaase la xaqiijiyey in uu Isbitaalka Ealing uu ku jiray 7-ba asbuuc, halkaas oo lagu daweynayey, qoyskiisa oo kaliya ayaa ogaa.
Jwxo-shiil, ayaa xiligii sawirka laga qaadayey xagiisa dambe la dhigay calankii uu cidhibtiray ee ONLF, oo uu hada ku waashay, isaga oo iska dhigay in uu yahay hogaamiyey ONLF.
Wararka qaar ayaa sheegaya in jidhku uu sidan ku noqday 2 todobaad, waxayna sheegeen in uusan tagin wax isbitaal ah, balse uu dadka ka dhuumanayey inta ay qolfuhu bogsanayaan
Jwxo-shiil, ayaa hadii uusan ahayn dab waxa oogadiisa ka muuqda, aan filayaa in uu yahay calaamado digniin ah oo Eebe keenay. Dad badan ayaa waxay leeyihiin waa dhiigii dadkii ay is-dhaarsadeen ee uu dilay iyo waliba dadqalnimadii hoose ee uu ummada ku dhameeyey.
Koleyba waxaan filaynaa in wax korkiisa ka muuqda in ay yihiin wax Eebe ka muujiyey oo lagu tusayo ummada in uu dhibaato gaystay.
Kooxda Jwxo-shiil, oo u Soo Dhigatay Culimada Diinta ee Dalka
Maamul Gabaleedka Somaliland iyo Kooxda Jwxo-shiil, oo Xidhiidh Cusub Dhexmaray Dhawaan